GPS को साथ तपाइँको अविश्वासी धोखा पति / पत्नीलाई कसरी ट्र्याक गर्ने सिंगापुर शीर्ष मिनी जीपीएस निजी ट्र्याकर ऑटिज्म / अटिस्टिक किड्स र डिमेन्शिया बुजुर्गका लागि
के तपाईंको जीवनसाथीले तपाईंलाई धोका दिदैछ? के तपाईलाई प्रमाण चाहिन्छ जस्तो लाग्छ? के तपाइँ तपाइँको शंका हटाउन ट्र्याकर राख्नु पर्छ? ठिकै हो, यो पूरै खराब छैन यदि तपाई आफ्नो पति या पत्नीको बारेमा थोरै असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरूले तपाईंलाई एक वा बढी कारणहरू प्रदान गर्न सक्दछन कि उनीहरूले तपाईंलाई धोका दिन्छ वा अर्को व्यक्तिलाई हेरिरहेका छन्। यदि तपाईं आफ्नो पति वा पत्नीको विश्वासघातको बारेमा शंका गर्नुहुन्छ र तपाईंले आफ्नो श confirm्काको पुष्टि गर्नु आवश्यक छ भने, GPS ट्र्याकर प्रयोग गर्नु अन्तिम विकल्प हुनुपर्दछ। त्यहाँ ध्यान दिन नैतिक मुद्दाहरूको एक गुच्छा छन् र पक्राउ पर्दा खतराहरू र समस्याहरू खडा हुन सक्छ।
यदि सबै नैतिक मुद्दाहरू र कानुनी समस्याहरू पछाडि खडा हुन सक्छ भने, तपाईं अझै अगाडि बढ्न सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। तपाईंको लागि उत्तम GPS उपकरण छनौट गर्दै; तपाईं जियोलोकेशन उपकरण, जीपीएस लक, एक सेल फोन ट्र्याकर वा ट्र्याक स्टिक पनि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। ट्र्याकिंग उपकरणहरू अब विविध आकार र आकारहरूमा आउँदछ जुन रिसीभरबाट रकेट आकारको हुनसक्दछ, सेल फोन वा रिस्टवाचमा संलग्न हुनको लागि सानो भएको व्यक्तिको लागि। प्रायः जीपीएस प्राय: सवारीसाधनमा यसको ठाँउ ट्र्याक गर्न स्थान र स्थान समय समयमा जान्छ। प्राय: जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणालीले टाढाका स्थानहरूबाट प्राय: वास्तविक समय ट्र्याकिंग अनुमति दिन्छ, उनीहरू प्राय: प्रत्येक2लाई5सेकेन्डमा सेलफोन / कम्प्युटरमा अद्यावधिक गरिन्छ जुन लगहरू ट्र्याक गर्न प्रयोग गरिन्छ। वास्तविक समय अनुगमनको अतिरिक्त, त्यहाँ यात्रा ईतिहास र सबै भन्दा भ्रमण गरिएको स्थानहरू संकेत गर्न भण्डारण गरिएका लगहरू छन्। जीपीएस ट्र्याकिंग उपकरणहरू सामान्यतया धेरै सस्तो र किफायती हुन्छन् र स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। मर्मत पनि धेरै सजिलो छ।
धेरै व्यक्तिहरू अझै पनी विश्वास गर्दछन् कि जालसाजी गर्ने पति / पत्नीलाई ट्र्याक गर्नको लागि निजी अनुसन्धानकर्ताहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, यो 21 होst शताब्दी र टेक प्रचुर मात्रामा छ। तपाईलाई हजारौं डलरको मूल्यको अन्वेषक राख्नुपर्दैन, यस्तो कार्य गर्न केवल ट्र्याकर पाउनुहोस् जसले स्थान खोज्न सैन्य उपग्रह प्रयोग गर्दछ। यो तरिका तपाईं लागत बचत गर्दै हुनुहुन्छ र पूर्ण रूपमा तपाईंको अनुसन्धानको प्रभारी हुनुहुन्छ।
GPS का प्रकारहरू:
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) लगर
जीपीएस लकगर एक ऐतिहासिक प्रकारको जीपीएस हो, यसले खासगरी खास भण्डारण स्थानमा लक्ष र भण्डारमा सूचना लग गर्दछ। यहाँबाट यो हेर्न र जानकारी लिन सकिन्छ जस्तै स्थान रेकर्ड, भ्रमण गरिएको समय, गति यात्रा र अन्तमा यस स्थानमा व्यतीत गरिएको समय। यदि तपाईं एक प्रकारका हुनुहुन्छ जो तपाईंलाई साथीले उनीहरूको बहुमत खर्च गर्दछन् भनेर जान्न चाहान्छन् भने, यो उपकरण पक्कै पनि तपाईंको लागि आवश्यक हुनुपर्दछ। यो तपाइँको जीवनसाथी सोधिएको छ जब उनीहरु को बारे मा इमानदार भइरहेको छ भनेर प्रमाणित गर्न एक धेरै उपयोगी उपकरण हो। जब तपाईं एक पति वा पत्नीलाई एक बहिष्कार भएको भनेर शing्का गरिरहनु भएको छ भने कुनै खास ठाउँमा मोटेल, भोज, रात्रिभोज वा अरू कसैको घरमा हुन सक्छ। तपाईं निश्चित रूपमा भन्न सक्नुहुनेछ किनकि तिनीहरूको स्थान जुन ट्र्याकर द्वारा जियोट्याग गरिएको छ तपाईंको भण्डारण उपकरणमा प्रदर्शन हुनेछ। उपकरण सामान्यतया आकारमा धेरै सानो हुन्छ र अझै राम्रोसँग यसको काम गर्दछ।
तपाईं ट्र्याकर सजिलैसँग राख्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको जीवनसाथीको सवारीमा, यो ट्र्याकरहरूको प्रकारमा निर्भर हुन सक्छ। जब तपाईं आफ्नो लग जानकारी डाउनलोड गर्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईं यसलाई सवारीबाट निकाल्न सक्नुहुनेछ यसलाई तपाईंको पीसी युएसबी पोर्टमा जडान गर्नुहोस् र जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस्। एकचोटि यो गरेपछि तपाईं या त उपग्रह वा नक्सा दृश्यमा लगहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जुन अझ बढी सम्बन्धित छ, यो पाठ ढाँचामा पनि हुन सक्छ। एक पटक यो जानकारी प्राप्त भएपछि, तपाईं यसलाई फ्ल्यास ड्राइभ वा डिस्कमा जलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईं यसको सूचना ढिलाइ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ।
वास्तविक समय जीपीएस यो सबैको धेरै चाखलाग्दो पक्ष हो, यस विशेष टेक्नोलोजीको साथ। तपाईं द गो मा ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ, यो प्राय: महँगो हुन्छ र यसको धेरै मर्मत र विशेषज्ञता चाहिन्छ तर यो काम अझ राम्रोसँग हुन्छ। यसले वेब आधारित सफ्टवेयर प्रयोग गर्दछ जुन जीपीएस टेक्नोलोजीसँग जडित छ, यससँगै तपाई सबै आन्दोलनको आधारमा अद्यावधिक हुनुहुनेछ चलिरहेको पहुँच सेल फोन वा कम्प्युटरमा इन्टरनेट मार्फत हुन्छ। वास्तविक समय तपाईं लक्ष्य को देखने को लागी को लागी उनीहरु को लागी पल्ट छन्। उदाहरण को लागी, जब ट्र्याकर खुल्ला छ र तपाई अहिले निरीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई आफ्नो पति या पत्नी लाई उनीहरुको स्थान प्रमाणित गर्न कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाइँका शंकाहरू हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, तिनीहरू झुठो हुन सक्छ; यसले तपाईंको शंकाको थप पुष्टि गर्दछ वा तिनीहरू इमानदार हुन सक्छन् र तिनीहरूको स्थान पुष्टि गर्न सक्दछ, यसले सामान्यतया शंका कम गर्दछ र विश्वासको स्तर बढाउँदछ। यो एक पुष्टिकरण हुनसक्दछ किनकि तपाईं बिना कारण चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको जीवनसाथीले अर्को व्यक्तिसँग समय बिताउँदैन किनकि तपाईंले सोच्नुभएको हुन सक्छ।
तपाईं लगइन गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंको पति / पत्नीले तपाईंलाई आज राती अबेर काम गरिरहेको बताउछ, यसले तपाईंलाई उनीहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्षम गर्दछ किनकि उनीहरूले भने जस्तो कि यो काममा वा अर्को विदेशी स्थानमा हुनेछ। यो वास्तवमै सहयोगी हुन सक्दछ जब तपाइँ तिनीहरूलाई रातो हातले वा कार्यमा समात्न चाहानुहुन्छ।
आधुनिक समयमा उपलब्ध वास्तविक समयको जीपीएस को लागी, तपाईले यो सचेत हुनुपर्दछ कि ती सामान्यतया मासिक सदस्यता शुल्कको साथ आउँदछन्। केहि मर्मत शुल्क पनि घटाउँछ, यो समग्र शुल्क प्रति महिना $ 20 देखि $ 70 मा हुन सक्छ। केही एकाईहरूले तपाईंलाई पाठ सन्देशको माध्यमबाट स्थानको दिशा पठाउन सक्दछन् तर आधुनिक समयमा यो अनावश्यक छ किनकि प्राय जसो स्मार्टफोनले केवल नक्सामा सिधा पहुँच गर्न र तपाईंलाई आवश्यक जानकारी दिन सक्छ।
रणनीतिक क्षेत्र जीपीएस ट्र्याकरहरू एक वाहनमा राख्न
GPS को इकाई राख्नु अत्यावश्यक छ जहाँ यसले उपग्रहसँग कुराकानी गर्न सक्दछ, उचित प्लेसमेन्ट एकदम महत्त्वपूर्ण र महत्त्वपूर्ण छ। तल ट्र्याकरहरू गाडीमा राख्न सकिन्छ भन्ने क्षेत्रहरूको सूची तल छ।
भित्र प्लास्टिक बम्पर
बग ढाल अन्तर्गत
विन्डो र हुड बीचको खाली ठाउँ
पछाडि ड्यास / तेस्रो ब्रेक प्रकाश अन्तर्गत
पछाडि प्लास्टिक बम्पर भित्र
भित्र पन्जा बक्स
पछाडि वा अगाडि सिट मुनि
6085 कुल दृश्यहरू5हेराइ आज